DHEGEYSO-Taliyaha ladagaalanka argagixisada Puntland oo ka digey siidaynta dadka la xukumo. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Taliyaha ladagaalanka argagixisada Puntland oo ka digey siidaynta dadka la xukumo.
Diseembar 1, 2016 9:41 b 0
Galkacyo, Dec 01 2016-Taliyaha Ciidanka la dagaalanka Argagixisada Gen Muxiyadiin Axmed Muuse, ayaa ugu baaqay garsoorka Puntland inaysan siidayn eedaysanayaasha iyo shaqsiyaadka la xukumay ee ciidanku gacanta kudhigaan.
Taliyaha ayaa sheegay in ay marar badan arkeen, go’aan ay maxkamadi gaartay oo Racfaan laga qaatay, kadibna danbiilihii oo kiiskii ku cadyahay, lasiidaynayo ama xabsi gaaban lagu xukumayo, loona ogolaanayo in uu iibsado, taas oo dhiiri galinaysa fasaadka.
DHEGEYSO-Dad shacab ah iyo Alshabab oo ku dagaalamay koonfurta gobolka Mudug.